Chaị! Ọ ka mma akwụkwọ ụgbọ elu Lufthansa gị site na Europe gaa United States ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Chaị! Ọ ka mma akwụkwọ ụgbọ elu Lufthansa gị site na Europe gaa United States ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Tourism • Akwụkwọ akụkọ USA
Lufthansa ijiji 76,000 Ndị mmadụ si Frankfurt Airport na First Ezumike Weekend
Ihe dị ka otu izu ka emechiri atụmatụ mmachi njem US, ndị ọrụ ụgbọ elu Lufthansa Group na -enwe ọganihu ọzọ maka ụgbọ elu na -aga United States.
N'ụbọchị ụfọdụ n'izu gara aga, ụgbọ elu na-agafe Atlantic riri okpukpu atọ karịa izu gara aga. Arịrịọ n'izu gara aga n'okporo ụzọ ụfọdụ fọrọ obere ka ọ bụrụ tupu nsogbu
ọkwa. Ụgbọ elu ndị SWISS sitere na Zurich na Lufthansa si Frankfurt ruo New York nakwa site na Frankfurt na Zurich ruo Miami nwere akwụkwọ kacha elu site na ezumike na ndị njem azụmahịa. Na Economy Premium, azụmaahịa na klaasị mbụ zụrụ tiketi karịa na USA karịa n'otu oge na 2019.
Ihe dị ka otu izu ka emechiri atụmatụ mmachi njem US, Lufthansa Group
Ndị na -anya ụgbọ elu na -enwe mmụba ọzọ maka ụgbọ elu na -aga United States. O doro anya
ụbọchị n'izu gara aga, ụgbọ elu ndị na-agafe Oké Osimiri Atlantic mụbara okpukpu atọ karịa
izu gara aga.
Arịrịọ n'izu gara aga n'okporo ụzọ ụfọdụ fọrọ obere ka ọ bụrụ tupu nsogbu
ọkwa. Jiri ụgbọ elu SWISS si Zurich na Lufthansa si Frankfurt gaa New York
site na Frankfurt na Zurich ruo Miami nwere akwụkwọ kacha elu site na ntụrụndụ abụọ
na ndị njem azụmahịa.
Na Economy Premium, azụmaahịa na klaasị mbụ zụrụ tiketi karịa na USA karịa n'otu oge na 2019.
Ndị otu Lufthansa na-emezu ihe a na-achọsi ike site na mwepụta ndị ọzọ
ụgbọ elu na USA na ọkwa dị mkpirikpi. Dịka ọmụmaatụ, Lufthansa na SWISS, ga -enye ngụkọta ụgbọ elu atọ kwa ụbọchị na Miami na ọkwa dị mkpirikpi malite na
Enwere nnukwu agụụ maka ụgbọ elu na USA maka Disemba na -abịanụ. Ọhụrụ
ntinye akwụkwọ n'izu gara aga maka ọnwa a dị elu ka ọ dị maka 2019 maka
otu oge ahụ. Ụgbọ elu na -aga New York - a na -achọkarị ya n'oge
oge ekeresimesi - enwelarị njikọ ndị ọzọ.
Ndị ụgbọ elu nke Lufthansa Group na -enye ihe ruru 55 njikọ kwa izu
New York site na mpaghara Europe ha dị iche iche na Austria, Belgium, Germany na
Switzerland na December. Mgbasawanye ọrụ dị mkpụmkpụ ọzọ dị ugbu a
na -echebara echiche.
Naanị New York na Chicago, ụgbọ elu Lufthansa Group na-enye njikọ kwa ụbọchị site na Europe na Nọvemba karịa ụgbọ elu na mpaghara Asia-Pacific niile.
Ndị otu Lufthansa na -atụ anya na mmeghe US maka ndị njem EU ọgwụ mgbochi
ga -abụ ihe mgbaàmà maka mba na mpaghara ndị ọzọ iji mee ka njem ụgbọ elu mba ofesi dị mfe ọzọ ma tụgharịa mmachi njem.
Ụgbọ elu ndị ọzọ dịkwa na Germany
Ndị otu Lufthansa na -abawanye ụgbọ elu ndị German na ọdụ ụgbọ elu ya na Europe
ka ọchịchọ maka ụgbọ elu US na -aga n'ihu. Dịka ọmụmaatụ, atụnyere Julaị,
Lufthansa na -abawanye ụgbọ elu German nke ụlọ ya site na pasent 45 site na ịmalite
Ọktoba. Nke a pụtara, n'etiti ihe ndị ọzọ, na ọnwa Ọktọba a ga -enwe itoolu kama ụgbọ elu isii kwa ụbọchị site na Frankfurt gaa Berlin. Ụgbọ elu si Frankfurt na Hamburg ga -abawanye site na ụgbọ elu isii ruo asatọ kwa ụbọchị. Ọnọdụ dị maka Munich:
Njikọ ise kwa ụbọchị na Berlin ugbu a ga -abawanye ruo asaa malite na
Ọktoba; kama ụgbọ elu isii kwa ụbọchị site na Munich gaa Hamburg, a ga -enwe ihe ruru
Ụgbọ elu 11 kwa ụbọchị n'ọdịnihu. Ọzọkwa malite na Ọktọba, Lufthansa ga -arụkwa ụgbọ elu oge elekere site na Hamburg na Berlin gaa na ọdụ ya na Frankfurt na Munich n'ụtụtụ na mgbede.
Site na mgbasawanye usoro ụgbọ elu, njikọ ndị ọzọ dị na ekwentị niile
ụbọchị. Nke a pụtara ndị njem achụmnta ego na -achọkarị ife efe n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ụtụtụ
mgbede ga -erite uru site n'usoro nhazi ụgbọ elu ka mma ndị njem ndị ọzọ.